Home Wararka Doorashada laba kamid ah kuraasta Golaha Shacabka oo lagu qabtay Jowhar
Doorashada laba kamid ah kuraasta Golaha Shacabka oo lagu qabtay Jowhar
Guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer dowlad Goboleed ayaa Maanta oo Isniin ah waxaa Magaalada Jowhar ee Caasimadda Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle ku qabteen doorashada laba kamid ah kuraasta Golaha Shacabka.
Kursiga Koowaad ee Hop#70 oo uu ka geeriyooday Aadan Cali Xasan (Aadan Jamhuuriya) ayaa waxaa Maanta ku tartamay Cabdiraxman Maxamed Sheekh & Maxamuud Cali Bariise, balse waxaa kursiga ku guuleystay Cabdiraxman Maxamed Sheekh.
Guddiga doorashooyinka Hir-Shabeelle ayaa ku dhawaaqay in Cabdiraxman Maxamed Sheekh uu helay 71 cod, halka Musharixii la tartamayay uu helay 14 cod, waxaana halaabay 13 Cod.
Kursiga labaad ee Hop#115 ayaa waxaa ku guuleystay Cali Maxamed Cumar ( Cali Balcad) oo kursigaan horay ugu fadhiyay kadib markii ay u tanaasushay Marwo, Mulki Cabdullahi Islaaw.
Xildhibaan Cali Maxamed Cumar ayaa loo qaaday codka kalsoonida ee ergada oo ay soo xaadireen 87 Ergay, waxa uuna helay 86 cod halka 1 qof uu Codkiisa u diiday, waxaana gudsigu shaaciyeen in markale kursiga uu ku guuleystay Cali Maxamed Cumar ( Cali Balcad).
Magaalada Jowhar ayaa waxaa horay loogu qabtay doorashada kuraas kamid ah Golaha Shacanka oo degaan doorashadoodu tahay Hir-Shabeelle, waxaana la filayaa in dhawaan kuraas kale lagu doorto Magaalada Jowhar.
Previous articleCabdirahman Maxamed Sheekh oo ku guuleystay kursiga Tirsigiisu yahay HOP 70
Next articleGuddiga doorashooyinka oo Saddex Bilood mushaar qaadan
Shabaab oo tiro yaab leh kasoo saaray shacabkii ku dhintay qaraxii...
Hubkii Al Sunna oo lagu wareejiyayay beelihii iska lahaa, iyo xaalad...